Boosaaso:-Munaasabad ku aadan ku dhawaaqida urur siyaasadeed cusub +Sawiro – SBC
Boosaaso:-Munaasabad ku aadan ku dhawaaqida urur siyaasadeed cusub +Sawiro
Posted by Webmaster on December 12, 2012 Comments
Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday gudaha Magaalada Boosaso ayaa waxaa loogaga dhawaaqay urur cusub oo ka mid noqonaya ururada siyaasadeed ee nidaamka Axsaabta badan ee Puntland.
Waxaa ka soo qeyb galay xaflada ku dhawaaqista ururkaasi Masuuliyiin, Culimo, siyaasiyiin iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ururka cusub ee lagu dhawaaqay ayaa loogu magacdaray Midnimo waxaana qudbado faah faahin ah halkaasi kajeediyay Gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee ururkaasi Dr Saadaq Eenoow waxaana uu ka faalooday ujeedooyinka ururkan iyo weliba wxyaabaha u qorsheysan
Dr Eenow ayaa intaasi ku darya in ururkiisu yahay urur mucaarad ah qeybna ka ah ururada siyaasadeed ee nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ka tirsan .
Waxa iyana halkaasi hadalo khiimo badan ka soo jeediyay Culimaa udiinkii ku sugnaa xaflada iyagoo sheegay in ay soo dhaweynayaan ururka Midnimo kuna boorinayaan in uu ku shaqeeyo waxyaabaha shaciga islaamku qabo, noqdana mid horseeda midnimo sida magaciisa ka muuqata.
Siyaasiyiintii ku sugnaa goobta xaflada waxa ka mid ahaa siyaasi Cali Cabdi Awaare oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan Puntland, waxaana uu halkaasi ka jeediyay hadalo aad u khiimo badan kuwaas oo ku aadanaa soo dhaweynta ururkan cusub.
Waxa uu tilmaamay Siyaasigu in loo baahanyahay ururada isa soo taagay una tartamaya codka shacabka reer Puntland, isaguna uu siweyn u soo dhaweynayo.
Sikastaba ha ahaatee ururka Midnimo ee lagu dhawaaqay waxa uu kamid noqonayaa ururo 4 ah oo horay u shaaciyay in ay in ay ka mid yihiin ururad asiyaasadeed ee Nidaamka Axsaabta badan Puntland, waxaana uu ku noqonayaa ururkii 5naad ee lagu dhawaaqo .
Waan soodhawaynayaa ururkan midnimo oo aan runtii aan aad ugu kalsoonahay gudoomiyiiha dr:aynaw weliba aan aad ugu farxay way mahadsanyihiin
Ahmed A Hersi says:
Waan soo weeynayaa ururkaan ilaakiin waxaan ku diidanahay wuxuu ka soo horjetaa halka sano oo dawladda Puntland uhadhay. Waxay abuursaa qillaaf hadii uu ka horymaado arrintaas.
waa soo dhawynaynaa xusbiga midnimo party waa xisbi barnaamij fiican inatusay waxanan rajaynayaa dhamaan gobalada iyo dagmooyinka inuu xafiisyo kafurto soona bandhigo qaabdhismeedkiisa iyo golaha dhexe ee xusbiga inshalaa doorashada may2013 isagaa kuguulaya
War xumow lagu waa!!!!Puntland waa dowlad rasmiya oo aan u baahnanyn cid aale abuurtay!!!
Kuwii mucaardka sheeganayey hadal maku haray, mise afkii baa juuqda gabay!!!
Dr. Enow waa nin wax qabad oo la hubo, waana hubaa in Puntland u baahan tahay!!!
Abdalaziz Gabax says:
waxay ila tahay xizbagan uu gudoomiyaha u yahay Dr. Saadaq Eenow, waa midkii ay mudda reer Puntland u baahneyd.. maxaa jira waa aqoon yahano wadani ah fahmayana shaqada muddu i igmatay
mustaf mahamed omar says:
waaw, waxaan halkaan kasalamaya siii hayaha gudomiyaha midnimo waxaan kaloo salamaya dhamaan intii kaso shaqaysay urukan waxaan amin sanahay inuu yahay uruka kaliya ee wax kabadalin doona siyaasada mamulka puntland ee uu kataagan yahay khilaafka ba’an waxan madax waynaha ka cod san lahaaa inuu isaga dago mamulka uu u soo istago dorosho balse aysan noqon miduu siduu dono uu kayesho waxan rabna dimuquradi asxaabyo waxaan donanyna hadi an nahay shacabka reerpuntland inaan katalaabno habqabiil waad mahad santihiin sidoo kale agaasimaha idacada sbc mowliid xaji xaji waan kusalamayaaa iyo dhamaan wariyasha idacada aad baad u mahad santihiin sida aad nooga haraad tirteen waxa calamka kadhacaya ??
maashaa allaah aad baan ugu farxay in culimadi iyo aqoonyahanadi maantay fahmeen in dalkoodu ubaahanyahay keliya aysan ku koobsan muxaadiro ee rabaan inay shaqo ku daraan allaah ha idinla garab galo
Abdirasaq islaan yaasin islaan warsame says:
Asc.waxaan leyahy hambalyo urur siyaasadeedka cusub midnimo.guul baan ku rajaynayaa.